10 Obodo Scenic Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Obodo Scenic Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Britain, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 24/10/2020)
Ala buru ibu na Europe bụ mmalite nke akụkọ ifo na akụkọ ifo, ala ndị mara mma na obodo ndị na-eme ka ihe nzuzo ochie dị. Ọ dị nso n'obodo etiti obodo mepere emepe ma ọ bụ zoro ezo n'azụ ugwu nzu, ọnụ ọgụgụ obodo nta ndị mara mma na-adọrọ adọrọ na Europe enweghị njedebe. ma, enwere 10 Obodo ndị mara mma na Europe nke njiri mara mma na anwansi na-achịkwa ndị ọzọ niile.
Okporo ígwè iga bụ ihe kasị environmentally friendly ụzọ njem. Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, The Weebụsaịtị ndị ụgbọ oloko dị ọnụ ala n'ụwa.
1. Na-ele anya, Switzerland
Obodo kachasị mara mma na Switzerland, Guarda bụ obodo nta, dị gburugburu ala ahịhịa juru. N'elu akuku ala ndagwurugwu Engadin, ma ọ bụ dịka ndị obodo si akpọ ya, Engiadina na-achịkwa ngosipụta ngosipụta Switzerland. E wuru ya na mbara ala anwula, 300 mita n’elu ndagwurugwu ahụ, na-eche nche ka ọbịbịa na-abịa, yana ọdịnala oge ochie dịka ịchụpụ oge oyi.
A na-eji ihe osise ọdịnala chọọ ụlọ ndị ọcha Ihe odide oge ochie a na-akpọ sgraffiti. Ndị Rom, asụsụ obodo, nke dịgidere ma na-ekwu okwu taa.
Basel ruo Chur site na Ọzụzụ
Bern na Chur nke Ọzụzụ
Turin na Tirano site na Train
Bergamo na Tirano site na Ọzụzụ
2. Obodo Scenic Na Europe: Cochem, Germany
Obodo nke dicha n’ikpere mmiri Moselle. Lọ ndị nwere ọkara ọkara na ụlọ ndị mara mma n'okporo ụzọ ahụ dị warara. Mara mma na ọdịda, Mgbe ahịhịa na ahịhịa ndụ ndụ na-eyi uwe ha na-acha ọla edo, na-agbakwunye na mma na ọdịdị ihe nkiri nke Cochem mara mma.
Osisi vaịn na ugwu gbara ya gburugburu, Obodo Cochem zuru oke na akwukwo ozi. Thezọ kachasị mma iji nweta obodo na snap niile nlele obodo anya bụ site anyịnya igwe.
Frankfurt na Cokem site na Ọzụzụ
Bonn na Cochem site na Ọzụzụ
Cologne na Cochem site na Ọzụzụ
Stuttgart na Cochem site na Ọzụzụ
N’agbata nnukwu ugwu, na mmiri nke osimiri Meuse, anọrọ ọdụ obodo mara mma nke Dinant na mpaghara Wallonia. Ihu uja, oyi, ma ọ bụ spring, obodo nta a dị ezigbo ịtụnanya na ihu igwe na oge ụbọchị. Echiche ndị mara mma dị mma karịa site na nkume-elu citadel.
Dome nke Collegiale Notre-Dame De Dinant bụ ihe pụtara ìhè na okirikiri ugwu nzu nzu.. Houseslọ ndị mara mma na ụgbọ mmiri ndị dị n’ihu, mezue echiche di egwu.
Ọ bụrụ n’inwetakwu oge, gaa na Castvecoeur Castle dị nso, Ubi nke Annevoie, na Chateau de Veves maka nlele akwukwo ndi ozo.
Brussels na nri site Train
Antwerp gaa Nri site Train
Garant to Dinant by Train
Iegha na Nri site Train
4. Obodo Scenic Na Europe: Norcia, Italy
N'azụ mgbidi, n'etiti ugwu ugwu, na East Umbria, ị ga-achọpụta sinik obodo Norcia. Obere obodo a mara ezigbo mma ma maa mma ile anya oge opupu ihe mgbe mmiri gbara gburugburu n'ụdị ụda dị iche iche..
Churches, Palalọ ndị .tali, gbakwunye na envinting echiche nke Norcia. Ọzọkwa, Osimiri Nera bụ ebe ọzọ ịgagharị na nwee ọmarịcha echiche nke Umbria mara mma na Italy. Na okporo ụzọ ijide n'aka na ị ga-achọ ọkwọ ụgbọala a ma ama, ma detụ nri mpaghara nke spaghetti ma ọ bụ frittata ya na akwa. Ọ bụ nanị Chukwu!
Milan si Rome nke Ọzụzụ
Florence na Rome nke Ọzụzụ Zitere
Pisa gaa Rome nke Ọzụzụ
Naples ka Rome site Ọzịza
5. Ezigbo, Mba netherland
Ọ bụrụ na ị na-aga Holland ịkpanye azụmaahịa tulip, wee gaa njem Lisse. Obodo a mara mma dị mma 45 nkeji pụọ na Amsterdam.
Lisse nwere ike ịbụ otu n'ime obodo pere mpe na Netherlands, mana ọ bụ n’ụlọ 7 nde okooko osisi ifuru kụrụ kwa afọ na ubi Keukenhof. Site na ngwụsị March ruo etiti ọnwa Mee, kọlụm ndị a tozuru oke tulips mara mma. N'ihi ya, O doro anya na Liss bụ ịhụnanya kachasị mma na oge opupu ihe ubi ma ị nọ maka ụfọdụ ụdị nlele na nlele agaghị echefu echefu.
Bremen ka Amsterdam site na Train
Ghara ike na Amsterdam site Ọzịza
Bielefeld ka Amsterdam site na Ọzụzụ
Hamburg na Amsterdam site na Train
6. Obodo Scenic Na Europe: St. Gilgen, Austria
Onye ọ bụla maara Hallstatt anwansi, mana obodo Austria bụ ọtụtụ obodo mara mma. Otu n'ime obodo ndị mara mma na Europe dị na Ọstria. St. Obodo eburula ụlọ Gilgen bụbu ezinụlọ Mozart, obodo a na-anọkwa n’akụkụ Ọdọ Mmiri Wolfgang.
I nwere ike jiri ụkwụ were nyochaa obodo a igwe, ma ọ bụ site n'ụgbọala USB. Ọ bụrụ na ịtụghị ugwu, mgbe ahụ echiche ndị na-emepe site na ụgbọ ala USB ga-ewepụ mmụọ gị n'ụzọ nkịtị. Echiche ndị mara mma nke ime obodo abụwo ihe mmụọ sitere n'aka ndị na-ese ihe nkiri Viennese.
Munich na Salzburg site na Ọzụzụ
Train ji Vien ruo Salzburg
Graz na Salzburg site na Ọzụzụ
Linz na Salzburg site na Ọzụzụ
7. St. Ndị nwere ezi omume, France
Ebe obibi nye nri nri nri nke nri nri nke nri nri nri nri nke nri nri nri nri, obodo nta nke St. Gini bụ 2 elekere sitere na Bordeaux. Nke a na-ekwe nkwa ubi vaịn mara mma gburugburu, ebe ị ga - esi nwee iko mmanya dị mma ka ị na - enwe mmasị na obodo na ime obodo.
St. Ihe ndi anyi ji eme njem 10 villageslọ ndị mara mma dị na Europe na-ekele ụlọ ndị nwere mgbidi ụlọ elu. Na mgbakwunye, the 12th-century church and 13th-century castle are right in the center of the village. Azọ nke na-efegharị ga-agafe obodo ahụ na ụlọ okwute oji ya na-acha oji ruo ebe kachasị dị anya na saịtị na saịtị.
St. Genies na-egosi akụkọ akụkọ ikuku France gọziri agọzi. Nwere ike ịnụ ụtọ ihe nkiri ahụ njem ụgbọ oloko n'ofe France.
Nantes ruo Bordeaux site na Ọzụzụ
Paris na Bordeaux site na Ọzụzụ
Lyon ruo Bordeaux site na Ọzụzụ
Marseilles ke Bordeaux site Ọzụzụ
8. Obodo Scenic Na Europe: N’agha, England
Colọ na-acha uhie uhie nwere obere ahịhịa na-acha ahịhịa ndụ na-enweghị ahịhịa na gburugburu ahịhịa na-eme ka Bibury bụrụ otu n'ime obodo kachasị mma na Europe.. Jide n'aka na-agbada Arlington Row, ụzọ kachasị adọrọ adọrọ na snaps mara mma.
Zọ ahụ ga-eduru gị ozugbo na ndụ nke narị afọ nke 17 na Bibury. Obodo kachasị mara mma na England dị n'akụkụ mmiri River Coln. Nke a bụ oge kachasị mma iji kpoo ajị anụ ụlọ. Ala mmetọ zuru oke maka n’ehihie anwụrụ ma ọ bụ n'isi ụtụtụ tupu ìgwè mmadụ na-eme njem akwụsịtụ ịdị jụụ ya na mkpọtụ ụra ya.
Amsterdam na London site na Ọzụzụ
Paris iji London site na Ọzụzụ
Togbọ okporo ígwè si Berlin gaa London
Brussels na London site na Ọzụzụ
9. Lindau na Jamanị
Obodo Lindau dị n'ókèala Austria na Germany, na Bavaria Germany. Ọ bụ otu n'ime mpaghara kachasị mara mma maka a daa ezumike na Europe. N'ikpere mmiri Lake Constance, akpọrọ Bodensee, obodo a bụ n'ezie Peninsula, ya na akwa eji ejikọ n’etiti mmiri na agwaetiti ahụ.
Ole na ole n'ime ụlọ ndị mara mma n'ime ime obodo ahụ bụ Maximilianstrasse Street, ụlọ ọkụ mgbe ochie dị narị afọ nke iri na atọ, na Old Old, Altstadt.
Lindau bụ ihe zoro ezo na Germany na otu obodo kwesiri ịnabata njem gị ọzọ. Enwere ụgbọ oloko Eurocity site na Munich, Zurich, na Stuttgart.
Berlin na Lindau site na Ọzụzụ
Munich na Lindau site na Ọzụzụ
Stuttgart na Lindau site na Ọzụzụ
Zurich na Lindau site na Ọzụzụ
10. Obodo Scenic Na Europe: Czech Krumlov, Czech Republic
UNESCO ụwa nketa saịtị, Obodo Cesky Krumlov na Bohemia bụ ngwakọta nke Renaissance, Gothic, na ihe owuwu Baroque. Buru n'Osimiri Vltava, Cesky Krumlov bụ otu n'ime osimiri ndị kachasị mma na Europe. Onyinyo ụlọ dị n’elu mmiri nwere ọdịdị mara mma n’okirikiri bụ n’ezie otu n’ime ihe ịtụnanya dị na Europe. Nke ahụ bụ ihe kpatara Cesky Krumlov nọ na anyị 10 obodo ndị mara mma na Europe ndepụta.
A na-atụkarị aro ka ọ rịgoro na ụlọ ezumezu nke Cesky Krumlov maka panorama agaghị echefu echefu nke Cesky Krumlov, Osimiri Vltava, na ọmarịcha okike gburugburu mpaghara Bohemia.
Nuremberg rue Prague site Train
Munich ka Prague sitere na Ọzụzụ
Togbọ okporo ígwè na Berlin ruo Prague
Train kwụrụ Vienna gaa Prague
Obodo Scenic Na Europe
Afọdụ n'ime obodo ndị mara mma na Europe bụ ndị zoro ezo na-eme njem nleta na nnukwu ugwu. Ezi akụ zoro ezo ndị a nwere ike ọ gaghị enwe ike iru, mana na teknụzụ nke taa, Ha dị nso karịa mgbe ọ bụla. Nwere ike ime obodo niile site na ọha iga, na njem ụgbọ okporo mkpirisi gafee Europe. Ọ bụ naanị ọtụtụ awa ka ị na-awagharị, na-adọrọ mmasị ma na-amachi foto nke ọdịbendị zoro ezo na echiche a.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta tiketi ụgbọ ala kacha ọnụ ala n'ime obodo ndị a dị na Europe.
Ị nwere chọrọ embed anyị blog post “10 Obodo Scenic Na Europe”N'elu saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/ የሰማይ አካላት– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / zh-CN na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
beautifuldestinations beautifulvillageseaurope Fairytaletowns scenicvillageseurope obodo nta
I'm a passionate writer, fierce solo traveler and blogger. I believe that language and words are powerful tools that can inspire and create new worlds. I love traveling and sharing my journeys through my stories with other women around the world - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zọ njem Sweden, Train Travel Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe
5 Kasị Beautiful Rivers Na Europe Iji Explore
Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Train Travel Hungary, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe